အဖေကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ... | ပြည့်စုံ
Pyae Sone | 10:23 PM | ၀မ်းနည်းမှတ်တမ်း
အဖေ သားကိုမေးသွားတယ်နော်… သားဖြေသိမ့်မရဘူးအဖေရယ်… ဒီနေ့ဆို အဖေ ဆုံးတာ တစ်လပြည့်ပြီနော်…
သားကိုယ်သား သိနေသလိုပဲအဖေရယ်… စိတ်တွေလေးနေတယ်… ဘာလုပ်လုပ်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်… အားလုံးက အလွဲလွဲအချော်တွေချည်းပဲ… သားအိမ်ကို အရမ်းသတိရနေတယ်… ဆက်သွယ်ချင်ပေမယ့် မြန်မာပြည်ရဲ့ ဆက်သွယ်မှု ကွန်ယက်တွေကြောင့် ဘယ်လိုမှ အဆက်အသွယ်မရဘူး… နောက်ညီဝမ်းကွဲတစ်ယောက် ပြောတယ်… အခုဆက်လို့ရပြီတဲ့ အော်တိုတွေဆင်လိုက်ပြီတဲ့ သားဝမ်းသာလိုက်တာ အဲဒီသတင်းကြားတော့လေ… သားဖုန်းဆက်တော့ ဘယ်လိုမှ ခေါ်မရဘူး.. ဖုန်းလိုင်းတွေက ပြတ်တောက်ပြတ်တောက်ဖြစ်နေတာ… အဲဒါနဲ့ ကျနော့်ကိုအရမ်းခင်တဲ့မန္တလေးက အမတစ်ယောက်က မောင်လေးဘာမှ မပူပါနဲ့တဲ့ သူဆက်သွယ်ပေးမယ်တဲ့… သူဆက်သွယ်ပေးခဲ့တယ်… အဲဒါနဲ့ ကျနော်အဆက်အသွယ်ရခဲ့တယ်… ၀မ်းသာစရာပေါ့ဗျာ.. အဒေါ်အိမ်မှာ အော်တိုဖုန်းရှိတယ်တဲ့.. အဲဒီကိုဆက်ပါတဲ့… အဲဒီသတင်းကြားတော့ဝမ်းသာလိုက်တာ… ငါခဏခဏဆက်လို့ရပြီဆိုပြီး အဲဒါနဲ့ မန္တလေးက အမက သူဆက်သွယ်ပေးတယ် ကျနော်ဆက်မယ် ဖုန်းစောင့်နေပါဆိုပြီး အိမ်ကိုလှမ်းဆက်သွယ်ပေးတယ်… ကျနော့်ဘ၀ရဲ့ အမှတ်တရနေ့ပေါ့…. ဧပြီလ ၂၄ရက်နေ့ကပေါ့… အမေ့ကိုခေါ်ပေးပါလို့ကျနော်ပြောတော့ ကျနော့်အစ်ကိုဖြစ်နေတယ်…သူက ညီမင်းနေကောင်းလားတဲ့ အမေရန်ကုန်သွားတယ်ညီမလေးရောပါသွားတယ်... မင်းကိုငါတို့ဆက်သွယ်တာ ဘယ်လိုမှ ဆက်လို့မရဘူး… မင်းအဆင်ပြေလားတဲ့ အေးငါအားလုံးအဆင်ပြေတယ် ငါလည်းဆက်သွယ်တာ ဘယ်လိုမှ ဆက်သွယ်လို့မရဘူး ငါအိမ်ကို အခုတလော အရမ်းသတိရတယ်ကွာလို့ ကျနော်ပြောတော့သူ ၀မ်းနည်းသံကြီးနဲ့ သူပြန်ပြောတယ်… မင်းကိုငါပြောစရာရှိတယ်.. ငါပြောမယ်နော်တဲ့ မင်းဘာမှ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့… စိတ်ခိုင်ခိုင်ထားနော်တဲ့… အေးပါ ငါဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး… မင်းရောနေကောင်းလားဆိုတော့ အေးကောင်းပါတယ်…ငါပြောမယ်နော်တဲ့.. အဖေဆုံးပြီ ဒီလ (၅)ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်(၄)နာရီက မင်းကိုဖုန်းဆက်တာဆက်လို့မရဘူး အဖေက သူမဆုံးခင်မှာ မင်းကိုပဲမေးနေတယ်… အဲဒါနဲ့မင်းကိုဆက်သွယ်တာဘယ်လိုမှ ဆက်မရဘူး.. မင်းကလည်း မဆက်သွယ်တော့ ဘယ်လိုမှ ဆက်သွယ်မရဘူးဖြစ်နေတာ… မင်းဘာမှ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ သေသွားပြီပဲ မင်းလည်း အဖေ့အတွက် ဆုတောင်းပေးပေါ့တဲ့… အစ်ကို ငါနေ့တိုင်းဆုတောင်းတယ် ညတိုင်းဘုရားရှစ်ခိုးတိုင်းပေါ့ ငါအရမ်းဝမ်းနည်းကွာ… ငါဘယ်လိုဖြေသိမ့်ရမလည်းကွာ… မင်းသိတဲ့အတိုင်း ငါတို့ခွဲခွာခဲ့တာ အခုဆို ၅ နှစ်ပြည့်တော့မယ်… အဖေနဲ့ စကားတစ်ခါမှ ကောင်းကောင်းမပြောဖြစ်ခဲ့ဘူး… အခုအဆက်အသွယ်ရတော့ အဖေဆုံးပြီဆိုတော့ ငါဘယ်လိုဖြေသိမ့်ရမလည်းကွာ… အမေဘယ်တော့လောက်ပြန်လာမလည်းဆိုတော့ တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်နေရင်ပြန်လာမယ် အိုကေ အဲဒါဆို နောက်နေ့ငါဖုန်းထပ်လိုက်မယ်.. အမေ့ကိုပြောလိုက်နော်…
ကံကြမ္မာကလည်း ရင်နာချင်းတွေပဲ ပေးခဲ့တယ်… နောက်…ကျနော်ဖုန်းထပ်ဆက်တော့ အမေနဲ့ဆုံတယ်… သားအခုနေကောင်းလားတဲ့ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်နော်တဲ့… သားဘယ်လိုခံစားရမယ်ဆို အမေသိပါတယ် ဒါပေမယ့်သားရယ် ဘယ်တတ်နိုင်မလည်း ဖြစ်သွားကြပြီဘဲ… ဆုတောင်းပေးပေါ့သားဖေဖေကို ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေလို့တဲ့…. အခု တလပြည့်အတွက် အမေတို့လုပ်မယ် သားအဲဒီကနေ အမျှဝေပေးပါ ညနေ(၅)နာရီလောက်မှာ ဘုန်းကြီးတရားနာမယ် သားဖုန်းဆက်နော်တဲ့…
အကုသိုလ်က ၀င်လာရင် အပေါင်းအဖော်ပါ ပါလာတတ်တယ်တဲ့ ကျနော့်အတွက်တော့ ဆွေမျိုးတွေပါပါတယ်ဗျာ… နောက်တစ်ရက်ဖုန်းထပ်ဆက်တော့ အမေ မရှိဘူးတဲ့ နင့်အန်တီအိမ်မှာတဲ့.. ဘာဖြစ်လို့လည်း မေးတော့ နင့်အစ်ကို ၀မ်းကွဲဆုံးပြီညကဘဲ.. ကားကားချင်းတိုက်တာတဲ့… ပွဲချင်းပြီးဘဲကြားရတဲ့သတင်းတွေကလည်းတစ်ခုမှ မကောင်းဘူး…. သူဆုံးတာ ၂၉ ရက်နေ့ သူ့ရက်လည်ဆွမ်းကျွေးက အဖေတစ်လပြည့်တဲ့နေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတယ်…. ၀မ်းနည်းစရာအဖြစ်အပျက်တွေချည်းပဲ… ၀ဋ်ကြွေးရှိခဲ့ရင် ဒီဘ၀မျှနဲ့ကြေပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်….
အဖေ…ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေအဖေ …. ဘ၀ဆက်တိုင်းဆက်တိုင်း… ကွေကွင်းခြင်းတွေနဲ့ ကင်းဝေပါစေအဖေ…. သားဘုရားရှစ်ခိုးရင်တောင်အခုသားပြောင်းပြီးရှစ်ခိုးနေရပြီအဖေ… အရင်က သားဘုရားရှစ်ခိုးတိုင်း အဖေကျန်းမာပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးအေးချမ်းပါစေ အမေလည်းကျန်းမာပါစေ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး အေးချမ်းပါစေ… အခုတော့ အဖေကောင်းရာသုဂတိလားပါစေလို့ ပြောင်းပြီးရှစ်ခိုးနေရပြီ…
အစ်ကိုရေ…. ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ… ဘ၀ဆက်တိုင်း ဒီလို အဖြစ်မျိုးနဲ့ကင်းဝေးပါစေ….
မိသားစုနဲ့ အဆက်အသွယ်ရအောင်ကူညီပေးခဲ့ကြသော ကိုကျော်ကျော်( အကောင်းဆုံးမြေသြဇာ)၊မန္တလေးမှအမ (မန္တလာသူ)ရန်ကုန်မှ ညီမ ဒါလေး၊ ညီလေး ချန်တူးဝမ် တို့အား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်...။
အချိန် - 10:23 PM
ဒီအိမ်လေးကို လာတုန်းက ခဏလေးဆိုပြီး အချိန်မရလို့ ပြန်တော့မယ်လို့။ ဒီပိုစ့်ခေါင်းစဉ်လေးကို ကြည့်ပြီး ဖတ်ချင်တာနဲ့ ဖွင့်ဖတ်လိုက်တာပါ။ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်မောင်လေးရယ်။ မိဘဆိုတဲ့ အရာဟာ ဘယ်လိုမှ တုနှိုင်းလို့မရတဲ့ အရာပါ။ ရေမြေခြားမှာ နေကြရတဲ့ မောင်နှမတွေရဲ့ စိတ်ကို နားလည်ခံစားလို့ရပါတယ်။ မောင်လေးရဲ့ ဖေဖေကို ကောင်းရာသုကတိကို ရောက်ဖို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ မိဘရဲ့ ကျေးဇူးကိုလည်း စပ်နိုင်ပါစေလို့ မကြီးဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်။
ဘ၀ဆက်တိုင်း မိသားစုနဲ့ ဝေးကွာခြင်းမှ ကင်ဝေးပါစေ။
ကျွန်တော်ဆို ၇နှစ် လောက်ရှိပြီး အဖေ ထားသွားတာ။
ဒါပင်မဲ့ အဖေက ကျွန်တော်တို့အတွက် အမေကို ထားသွားခဲ့တယ်ဗျ။
ဘာပြောပြော အဖေ ကို ကျေးဇူးတင်နေရပါတယ်။
ပို့စ်လေးဖတ်ပြီး ကြက်သိးဖြန်းဖြန်းထသွားအောင် ခံစားလိုက်ရပါတယ် ပြည့်စုံရေ....
အစ်မလည်း ပြည့်စုံနဲ့ ဘ၀တူတယ်လို့ပြောရပါလိမ့်
မယ်... အစ်မ ဂျပန်ရောက်ပြီး ၈ လလောက်မှာ အစ်မရဲ့
ဖေဖေက မထင်မှတ်ပါဘဲ ဆုံးသွားခဲ့တယ်လေ... အစ်မ
အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည်ကို တစ်လအ
အစ်မဆိုရင် တစ်လတစ်ခါ အမြဲဆက်ဖြစ်တယ်..
တခါတလေ စိတ်လေနေရင် တစ်လ ၂ ခါ ၃ခါ ဆက်ဖြစ်
ပြည့်စုံလဲ မေမေရှိနေသေးတာမို့ မိဘ အသက်ရှိနေချိန်မှာတန်ဖိုးထားပြီး သတိရကြောင်းလေး
ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောဆို သတင်းမေးပြီး မိဘကို ဖြေသိမ့်အား
ပေးပြီး အဝေးတနေရာမှနေပြီး မိဘစိတ်ချမ်းသာအောင်
ဟာ..ဗျာ... အကို့အဖြစ်ကလဲ မြွေပူရာ ကင်းမှောက်တဲ့အဖြစ်လိုပါပဲလားဗျာ... မြင့်မိုလ်တောင်မကကျေးဇူးကြီးတဲ့အဖေကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ ၀မ်းနည်းလို့မှ မပြီးသေးဘူးဗျာ
အကိုရေ အဖြစ်ဆိုးတွေကဝေးပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ
မလွဲမသွေတွေ့ ကြုံရမယ့် ဘဝရဲ့နောက်ဆုံး
ခရီးအတွက် အစ်ကို့ ရဲ့
ဆုတောင်းပေးတာလေးထက်။ မောင်လေးပြုသမျှကုသိုလ် များကို အမျှပေးဝေ ပေးပါ။
အစ်မ ဘိုးဘိုးဆုံးတာလည်း ၃.၅.၂၀၀၉ မှာ တစ်လပြည့်ပါတယ်။ ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ဖို့အတွက် ကုသိုလ်ဒါနများပြုလုပ်ပေးပြီး အမျှပေးဝေခဲ့ပါတယ်။ သေပြီးသူအား သာဓုအပြည့်အ၀ ခေါ်ဆို နိုင်ဖို့ ဆွမ်း၊သက္ကင်္န်း၊ကျောင်း၊ဆေး ၄မျိုးတို့ လှူဒါန်းပေးရတယ်လို့ ဆရာတော်တစ်ပါးဟောကြားဖူးပါတယ်။မောင်လေး လှူပေးလိုက်ပါ။
အကိုရေ ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားရပါတယ်..
၀ိုင်းပြီးဆုတောင်းပေးပါတယ်...ပြည့်စုံရဲ့ ဖေဖေ ကောင်း ရာသုဂတိ လားပါစေကကွာ...
ကိုပြည့်စုံရေ... သိရတာ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ အဝေးရောက်နေတဲ့ သားသမီတယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လောက်ထိ ခံစားရမယ်ဆိုတာ နားလည်မိပါတယ်။
ဆုလည်းတောင်းရင်း အကို့အဖေအတွက် အလှူအတန်းတခုခုလုပ်ပြီး အမျှဝေပါလား။
ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားရပါတယ် အကိုရေ... အကို့အဖေ ကောင်းရာ သုဂတိကို လားပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်။ ဘာမှလည်း သိပ်စိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့နော်။ ကို့ကိုယ်ကိုလည်း ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်နော်... အကို့မှာ အမေ ရှိသေးတာပဲလေ။ ဘာမှ စိတ်အားမငယ်ပါနဲ့နော်။ သွားလေသူအတွက် လုပ်ပေးနိုင်တာက ကိုယ်ပြုလေသမျှ ကောင်းမှူကုသိုလ်တွေကို အမျှဝေပေးရင် သူ့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ဘုံဘ၀ကို ရောက်နိုင်တာပေါ့...
ထပ်တူထပ်မျှခံစားရပါတယ်။ ကိုပြည့်စုံရေ။ ကိုပြည့်စုံ စိတ်သက်သာရာရပါစေလို့ သမီးဆုတောင်းပေးပါတယ်။ ကိုပြည့်စုံအမေလည်း အသက်ရှည်ကျန်းမာပါစေ။ ကိုပြည့်စုံအဖေလည်း ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ပါစေ။ သမီးအဲ့လိုပဲဆုတောင်းပေးတတ်လို့ပါနော်။
အကိုရေ ခုမှ လာဖတ်တာပါ။ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် အကိုအဖေလဲ ကောင်းရာမှာ ရောက်နေမှာပါ။ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါ အကို..
အန်မတန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ။် အတူဆုတောင်းပေးပါတယ်။ အဖေကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ
ပြည့်စုံ အဖေရော အကိုရော ကောင်းမွန်ရာ ဘုံဝကို ရောက်ရှိခံစားနိုင်ပါစေ .. ၀ဋ်ကြွေးတွေရှိရင်လည်း ဒီဘ၀မှာတင် ပြီးဆုံးပါစေနော် ..
တစ်လကျော်သွားမှ ဒီပို့စ်လေးကို လာဖတ်မိပြီး
ရင်ထဲမကောင်းပါဘူး.. ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဲလိုဝေးနေကြ
and may your father's soul be rest
in peace !!
ကံကြမ္မာကလည်း ရင်နာချင်းတွေပဲ ပေးခဲ့တယ်… .. ကျနော့လို အဖေရူးသွပ်သူနဲ့မှ ဒီပို့စ်နဲ့ လာတိုးတယ်။ ပို့စ်လေးဖတ်ပြီး ခေါင်းတွေချာချာလည်သွားတယ်။ မျက်လုံးတွေဝါးလာတယ်။ ကျနော် အိပ်ေ၇းပျက်တဲ့ညတွေ များလို့လား။ အဖေ့ကို သတိ၇သွားလို့လား။ ကျနော်တို့လို ပြည်ပေ၇ာက်နေသူတွေအတွက်တော့ ကီဝီတစ်ကောင်လိုပါပဲ။ (ကီဝီ = ငှက်၊ သို့သော် သူမပျံနိုင်ဘူး) အဖေ မရှိတော့ပေမယ့် အဖေ သေဆုံးမသွားဘူး.... ဟောဒီ... ၇င်ထဲမှာ... အမြဲရှိနေ၏။ အားပေးစကားပြောဖို့ ကျနော်စကားလုံးရှာမရဘူး။ ခုချိန်မှာ ကျနော်ငိုချင်နေတယ်။ (ထပ်တူထပ်မျှ....) မိတ်ဆွေရဲ့အဖေ ကောင်းရာသုကတိ လားပါစေဆုတောင်းရင်း.... ကျနော်...ဒီည ငိုပါ၇စေ။
တိုင်းရင်းသား မိဘပြည်သူများသို့ ပန်ကြားချက်